Ukuprintwa kwelifu kwiChannelbook yakho
Icandelo le-Chromebook yeeDummies Cheat Sheet
Inxalenye yento eyenza inkqubo yokusebenza kweChannelbook, i-Chrome OS, ngokukhawuleza kukuba ixhasa inani eliqingqiweyo lezixhobo zehardware kwintengiso, kubandakanya neeprinta. Kodwa oko akuthethi ukuba i-Chromebook abasebenzisi zilinganiselwe. Ngombulelo, uGoogle ukhuphele ngaphandle indlela yokuprinta kwiwebhu- ukushicilelwa kwelifu .
Ukuprintwa kwelifu kukuvumela ukuba uqhagamshele umshicileli kwi-Intanethi kwaye ufikelele kuwo usebenzisa iakhawunti yakho kaGoogle. Kukho iiprinta ezininzi kwimarike ezishicilelweyo ngelifu- zinikwe amandla, kodwa kwimeko apho umshicileli wakho engekho, sukukhathazeka. Usenokuseta ukuba uprinte.
Ukuseta ukushicilelwa kwelifu kunye nomshicileli weklasikhi (Oko kukuthi, enye ayiprintwanga ngelifu-yenziwe), uyakufuna ikhompyuter- leyo ingeyiyo i-Chromebook- kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi. Emva koko landela la manyathelo:
Xhuma umshicileli wakho kwikhompyuter yakho engeyiyo ye-Chromebook kwaye uyinike amandla.
Vula iwindow yesikhangeli se-Chrome kule khomputha.
Xa i-Chrome ilayishiwe, cofa iqhosha lokuseta kwikona ephezulu ngasekunene kwefestile.
Imenyu iya kubonakala ityhila iindlela ezininzi.
Ukusuka kwimenyu, khetha Useto.
Izicwangciso zakho ze-Chrome ziya kulayishwa kwisikhangeli se-Chrome ngendlela efana ne-Chromebook yakho.
Qiniseka ukuba ungene kwi-Chrome ngeakhawunti efanayo kaGoogle oyisebenzisayo ukufikelela kwiChannelbook yakho. Ukuba awukwenzi oko, cofa kwiQhawula iakhawunti yakho kaGoogle iqhosha kwaye ungene kwakhona kunye neenkcukacha ezichanekileyo ngaphambi kokuba uqhubeke!
Cofa ubonise izicwangciso eziphambili.
Kwicandelo lokuPrinta iLifu likaGoogle kolu seto, cofa uLawula.
Uluhlu lwezixhobo luyavela. Ezi zizixhobo ezikwinethiwekhi yakho onokuthi ubhalise kuGoogle Cloud Printa.
Kwicandelo lePrinta leClassic lolu luhlu, cofa Yongeza iiPrinta.
Isikrini siyavela, sikunika ukhetho lokongeza yonke iprinta efakwe kwisixhobo sakho.
Sukukhangela yonke iprinta ngaphandle kweprinta osuka kuyo uqhagamshele kwi-non-Chromebook yakho. Emva koko cofa Yongeza iPrinta.
Iphepha lokuqinisekisa liyavela, elibonisa ukuba ukuseta kweprint-cloud kuphumelele.
Ngoku ungasebenzisa le printa ukuprinta kwilifu. Khumbula, nangona kunjalo, ukuba xa ufuna ukushicilela, ikhomputha apho umshicileli wakho weklasikhi uqhagamshelwe khona kufuneka ixhumeke kwi-Intanethi.
isetyenziselwa ntoni ipipen
Imiphumo emibi ye-metformin
amayeza e-helicobacter pylori
iziphumo ebezingalindelekanga ze-dilantin
idosi eqhelekileyo yelexapro
yenza ukuba ungene kwi-boot windows 10